TANF helps low-income families in the USA. This program provides some cash to help families who meet the program requirements. သင်သည်သင်၏မိသားစု၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက် TANF ထံမှပိုက်ဆံသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလည်းအလုပ်နှင့်မိသားစုတာဝနျကလူပြင်ဆင်ထားရန်ကူညီပေးသည်. အချို့သောပြည်နယ်များရှိ, you are required to work asavolunteer to receive TANF. TANF လျှောက်ထားရန်, contact the TANF office in your state.
ဖြည့်စွက်လုံခြုံရေးဝင်ငွေခွန် (SSI) မသန်စွမ်းလူကြီးများကကူညီရန်ဖြစ်ပါသည်, ကလေးများ, နဲ့လူ 65 နှင့်ဝင်ငွေနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုကန့်သတ်ထားကြသူမသန်စွမ်းခြင်းမရှိဘဲအဟောင်းတွေ. All citizens get SSI and some non-citizens are eligible too. Learn about SSI for non-citizens.
An important note about SSI: Some refugees and other non-citizens who get SSI will stop getting it after7အနှစ်. But if you becomeacitizen, you can continue to receive SSI for as long as you need it.
Social Security Disability Insurance (SSDI) isabenefit for people who cannot work because ofadisability. Non-citizens and citizens can get only SSDI if they have worked and earned enough Social Security credits. သင်လုပ်နိုင်သည် find Social Security information in many languages.
Medicaid ကိုဝင်ငွေနည်းမိသားစုများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ, အမေရိကန်နှင့်အချို့သောလူကြီးများ. ဒီပရိုဂရမ်အားလုံးဝင်ငွေနည်းအမေရိကန်တွေအဘို့ဖြစ်၏. ပြည်နယ်အများစုတွင်လည်းသားသမီးတို့အဘို့အခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုပေးအစီအစဉ်များရှိ. Learn more about Medicaid.
Medicare ကျကွီးရှယျအိုမြားများအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် (ကျော် 65 နှစ်အရွယ်တစ်ဦးချင်းစီ). ဒီပရိုဂရမ်ကိုလည်းမသန်စွမ်းလူများအတွက်အာမခံပေးသည်. Medicare အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ.
Going to the doctor in the USA can costalot of money. အာမခံသငျသညျကိုကူညီနိုငျအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ. သငျသညျအာမခံရှိသည်ရင်တောင်, သင်ဆဲဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်အချို့ပိုက်ဆံပေးချေရန်ရှိစေခြင်းငှါ.
“Public charge” means someone who uses public benefits foralong time. အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ (USCIS) says that someone who is likely to beapublic charge cannot becomeapermanent resident (green card holder). USCIS says that people who receive SSI, TANF, Medicaid or cash assistance from their state may not be allowed to become permanent residents. Other benefits, such as school lunches and children’s health insurance, do not count. Please read about the new public charge rule to be informed about the risks of being consideredapublic charge.
You can also read more ယင်းနှင့် ပတ်သက်. USCIS မှသတင်းအချက်အလက် စသောအပြောင်းအလဲအသစ်များကို.
ပြည်သူ့အကျိုးခံစားခွင့်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရဖို့စာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည်. The goal of public benefits for refugees is to provide for your basic needs until you are able to findajob. USA တွင်, သင်သာအချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ငွေပမာဏများအတွက်အများပိုင်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိနိုငျ. သင်သည်သင်၏မိသားစုများအတွက်ဝင်ငွေအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်ဝင်ငွေကိုစတင်ရန်တစ်ချိန်ကဤသည်ကိုဆိုလိုသည်, သငျသညျအများပြည်သူအကျိုးခံစားခွင့်ရတဲ့ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်.